သင့်ရဲ့ဖုန်းပေါ်မှာ YOUTUBE ကနေဗီဒီယိုတွေကိုဒေါင်းလုပ်လုပ်လုပ်နည်း - ဖုန်းကို - 2019
သင့်ရဲ့ဖုန်းပေါ်မှာ YouTube ကနေဗီဒီယိုတွေကိုဒေါင်းလုပ်လုပ်ရန်
သငျသညျ YouTube ပေါ်မှာဗွီဒီယိုတစ်ခုကြိုက်တယ်ဆိုရင်ဝန်ဆောင်မှုအပေါ်သီချင်းစာရင်းထည့်သွင်းခြင်းဖြင့်သိမ်းဆည်းနိုင်သည်။ သင်ဤဗီဒီယိုကိုရယူရန်လိုအပ်တယ်ဆိုရင်သင်အွန်လိုင်းမရနိုငျသောအခါဒါပေမယ့်ဥပမာ,, ကသင့်ဖုန်းကို download လုပ် သာ. ကောင်း၏။
သူ့ဟာသူ hosting ဗီဒီယိုကိုဗီဒီယိုများဒေါင်းလုတ်လုပ်နိုင်စွမ်းသည်မဟုတ်။ သို့သျောလညျးသငျသညျအခြို့သောအရည်အသွေးတစ်ဦးအထူးသဖြင့်ဗီဒီယိုတစ်ခုကိုဒေါင်းလုပ်လုပ်ကူညီနိုင်လိမ့်မည်ဟု extension များ, applications များနှင့်ဝန်ဆောင်မှုများကိုအများကြီးရှိပါတယ်။ ဤအတိုးမြှင့်အချို့သည် pre-installation နဲ့မှတ်ပုံတင်ကိုတောင်းအခြားသူများကိုမကျင့်။
သူတို့ရဲ့အချက်အလက်များ၏ download, အ installation နဲ့အပြောင်းအရွှေ့နှင့်အတူမည်သည့်လျှောက်လွှာ / ဝန်ဆောင်မှု / တိုးချဲ့နေထိုင်သတိပေးချက်ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒါကိုနည်းနည်းပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းများနှင့် downloads, ရှိပါက, အဲဒါကိုအန္တာရာယ်မှမအကောင်းဆုံး, ဒါကြောင့်တိုက်ခိုက်သို့ပြေး၏အခွင့်အလမ်းလည်းမရှိ။
နည်းလမ်း 1: ဒီ application ကို Videoder
Videoder (ကရိုးရိုးရုရှားစကားပြော Play ကိုစျေးကွက်ထဲမှာ "ဗွီဒီယိုကို Downloader ကို" ဟုခေါ်ခြင်းဖြစ်သည်) - ဒီအသုံးပြုသူများထံမှအတော်လေးတစ် Play စတိုးအပေါ်သန်းကျော် downloads, ရှိကြောင်းလူကြိုက်များလျှောက်လွှာအဖြစ်မြင့်မားသောအမှတ်အသားများဖြစ်ပါသည်။ ကြောင့်မကြာသေးမီက Google ကအယူခံတရားရုံးကခက်ခဲများနှင့်ခက်ခဲဖြစ်လာ YouTube ဖြင့်အလုပ်လုပ်သောကွဲပြားခြားနားသောဆိုက်များမှဗီဒီယိုများဒေါင်းလုဒ်ဆွဲချရန် Play ကိုစျေးကွက်လျှောက်လွှာထဲမှာတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။
အဆိုပါဘာသာရပ်လျှောက်လွှာသေးဤဝန်ဆောင်မှုကိုထောက်ပံ့နေသည်, သို့သော်အသုံးပြုသူ bug တွေအမျိုးမျိုးနှင့်အတူအခွင့်အလမ်းတှေ့ဆုံရှိပါတယ်။
အောက်မှာဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်းပြုလုပ် operating by:
ပထမဦးစွာတွေ့ပါနှင့် Play ကိုစျေးကွက်က download လုပ်ပါ။ Google ရဲ့လျှောက်လွှာစတိုးဆိုင် interface ကိုမဆိုအသုံးပြုသူများအတွက်အလိုလိုသိဖြစ်တယ်, ဒါဤနေရာတွင်သင်ကပြဿနာတစ်ခုပေါ်ထွန်းသင့်ပါတယ်ရှိသည်။
သင်ပထမဦးဆုံးလျှောက်လွှာကိုဖွင့်လိုက်တဲ့အခါဖုန်းပေါ်မှာသင့်ရဲ့ဒေတာအချို့ကိုဝင်ရောက်ဖို့လှုံ့ဆော်ပေးခဲ့တယ်။ စာနယ်ဇင်းများ "Allow"ကဗီဒီယိုတွေကိုသိမ်းဆည်းဖို့တစ်နေရာရန်လိုအပ်ပါသည်ကတည်းက။
ထိပ်မှာရှာဖွေရေးအကွက်တွင်အပေါ် click နှိပ်ပြီးဒေါင်းလုပ်လုပ်ချင်ပါတယ်ကြောင်းဗီဒီယို၏အမည်ကိုရိုက်ထည့်ပါ။ သငျသညျရိုးရှင်းစွာပိုမိုမြန်ဆန်ရှာဖွေ, YouTube မှဗီဒီယိုခေါင်းစဉ်ကူးယူနိုင်ပါတယ်။
SERPs ရလဒ်များကိုကြည့်ပြီးလိုချင်သောဗီဒီယိုကိုရွေးချယ်ပါ။ ဒါဟာဒီဝန်ဆောင်မှုကိုယူကျု့မှသာအလုပ်လုပ်သည်ကိုအောက်မေ့ရကျိုးနပ်သည်, ဒါပေမယ့်လည်းအခြားဗီဒီယို hosting site များ, ဒီတော့ရလဒ်ကတခြားသတင်းရင်းမြစ်များမှဗီဒီယိုများလင့်များချော်နိုင်ပါတယ်။
သင်အလိုရှိသောဗီဒီယိုကိုရှာတွေ့သည့်အခါရိုးရိုးမျက်နှာပြင်ရဲ့အထက်ညာဖက်မှာဒေါင်းလုပ်အိုင်ကွန်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ။ ဒေါင်းလုပ်ကိုအလိုအလျောက်စတင်ပါလိမ့်မယ်, ဒါပေမယ့်အချို့ကိစ္စများတွင်သင် download လုပ်ဗီဒီယိုအရည်အသွေးကိုရှေးခယျြဖို့တောင်းနိုင်ပါသည်။
အားလုံးဒေါင်းလုပ်လုပ်အကြောင်းအရာအတွက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည် "Galleries"။ လျှောက်လွှာဤဝန်ဆောင်မှုပံ့ပိုးမှုမပေးတော့ကြောင်းရေးလိုက်ပါလိမ့်မယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကြောင့်မကြာသေးမီတရားစီရင်ရေးကုသမှု YouTube မှအချို့သော Google ကဗီဒီယို, သင်ဒေါင်းလုဒ်မဆွဲနိုင်။
Method ကို 2: တတိယပါတီက်ဘ်ဆိုက်များ
ဤကိစ္စတွင်ခုနှစ်, အရှိဆုံးယုံကြည်စိတ်ချရသောနှင့်တည်ငြိမ်က်ဘ်ဆိုက်များများထဲမှ Savefrom ဖြစ်ပါတယ်။ က, သင်ယူကျု့မှနီးပါးမည်သည့်ဗီဒီယိုတစ်ခုကိုဒေါင်းလုဒ်ဆွဲနိုင်ပါသည်။ ဒါဟာသင့်ရဲ့ဖုန်းသို့မဟုတ် PC နဲ့ထိုင်နေကြတယ်ဖြစ်စေ, ကိစ္စသည်မ။
သင်တို့အားရှေ့ဦးစွာမှန်ကန်သောခေါ်ဆိုခ forwarding ကိုလုပ်ဖို့လိုတယ်:
(မ Android အတွက် App ကိုတဆင့်) YouTube ကို၏မိုဘိုင်းဘရောက်ဇာကိုဗားရှင်းအတွက်မဆိုဗွီဒီယိုကိုဖွင့်ပါ။ သင်သည်မည်သည့်မိုဘိုင်းဘရောက်ဇာကိုသုံးနိုင်သည်။
လိပ်စာဘားခုနှစ်တွင်သင်သည်သင်၏ site ကို URL ကိုပြောင်းလဲပစ်ရန်လိုခြင်းနှင့်ဗီဒီယိုကိုအပ်ရပါမည် "ဆိုင်းငံ့"။ ကိုးကားစရာအောက်ပါအတိုင်းပြုလုပ်ကြည့်ရှုစေရန်ပြောင်းလဲရပါမည်://m.ssyoutube.com/(ဗီဒီယိုလိပ်စာ), ထို့မတိုင်မီဖြစ်ပါသည် "Youtube ကို" ရုံနှစျခုအင်္ဂလိပ် add "အက်စ်အက်စ်".
စာနယ်ဇင်းများ ဝင်ရောက် forwarding ကိုပါ။
စာမကျြနှာတှငျသငျသငျသညျကို download လုပ်ချင် Savefrom ဗီဒီယိုမြင်လိမ့်မည်။ ခလုတ်ကိုကိုရှာဖွေနည်းနည်းအောက်ကိုဆင်း "ဒေါင်းလုပ်".
အဲဒါကိုကလစ်နှိပ်ခြင်းပြီးနောက်သင်ဗီဒီယို format ကိုရွေးဖို့သတိပေးခံရလိမ့်မည်။ မြင့်မားကပိုကောင်း, ဗွီဒီယိုနဲ့အသံအရည်အသွေးဖြစ်ပါသည်, သို့သော်ကြာကြာကြောင့်ကိုယ်အလေးချိန်တိုးအဖြစ်, loaded လိမ့်မည်။
ဗီဒီယိုကိုအပါအဝင်သင်သည်အင်တာနက်ကနေ download လုပ်ပါသောသူအပေါင်းတို့သည်, ဖိုင်တွဲထဲမှာသိမ်းထားပါတယ် "ဒေါင်းလုပ်"။ ဗွီဒီယိုများ (သင့်လျော်ပင်သာမန်ဆိုကစားသမားများကဖွင့်နိုင်ပါသည် "ပြခန်း").
မကြာသေးမီကကြောင့် Google ကတက်ကြွစွာပါကစစ်တိုက်ခြင်းနှင့်အလားတူအခွင့်အလမ်းပေး applications များ၏လှုပ်ရှားမှုကန့်သတ်ရန်ကြိုးစားနေကြပါတယ်အဖြစ် Yutuba ဖုန်းဖြင့်ဗွီဒီယိုတစ်ခု file ကို download လုပ်ပါမှ ပို. ပို. ခက်ခဲဖြစ်လာသည်။
ဗီဒီယို Watch: Kurtz Marketing Code LLC Palm Harbor, FL Its Time to go Mobile-Friendly Today! (စက်တင်ဘာလ 2019).